Dhabaha tareenada ee u dhaxeysa Stockholm iyo Uppsala oo hakid ka jiro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
safaf dhaadheer oo loogu jiro basaska bedelaya tareenada hakaday. Foto: August Bergkvist / SR
Dhabaha tareenada ee u dhaxeysa Stockholm iyo Uppsala oo hakid ka jiro
La daabacay torsdag 26 juli 2012 kl 13.52
Rakaab gaaraya kumanaan oo ah dadka ku socdaala inta u dhaxeysa magaalada Stockholm iyo Uppsala ayaa waxaa saakay saammeyn ku yeeshay dib u dhac ku yimid safarkooda ka dib markii dab uu ka kacay xarun koronta oo dab siisa wadada xadiidka ee tareenka uu maro. Shirkada tareenada ee SJ ayaa ku guuleystay in ay dadka u hesha basas bedela tareenada hakaday.
Xayiraadan ayaa saammeysay guud ahaan noocyada kala duwan ee tareenada u kala goosha magaalooyinka Stockholm iyo Uppsala.
Hay'ada gaadiidka ayaa sheegtay in cilad dabka uu dhaliyay ay saameysay wadada xadiidka ee u dhaxeysa degmooyinka Häggvik iyo Upplands Väsby iyada oo cildaaasi la xalin waayay ilaa iyo maata xilliga qadada.
Baaritaan la sammeeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in cilada jirta ay ka weyntahay inta marka hore loo qaatay iyada oo hay'ada gaadiidka ay sheegtay in ay ku raja weyntahay in ay xaliso galabta.
Hay'ada gaadiidka ayaa markii hore u qaadatay in dhibka uu yahay qalabka wax xiriiriya oo ku xiran wadada xadiidka ah ee tareenado maraan hase yeeshee markii dambe ayaa la gartay in dabka kacay uu sababay dhibaato weyn.